आज नेप्से १.४१ ले घट्यो, कारोबार रू. ६५ करोड
काठमाठौं माघ १५ गते । साप्ताहिक व्यापारको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक १ दशमलव ४१ अङ्क घटेको छ । बिहीवार अघिल्लो दिनको बन्द विन्दु ९ सय ८८ दशमलव शून्य ७ बाट बजार खुलेको हो ।
बजार खुलेदेखि उकालो लाग्न थालेको नेप्से परिसूचक ४५ मिनेटको व्यापारमा ९ सय ९५ दशमलव १२ मा उक्लिएको थियो । त्यसपछि बाटो परिवर्तन गरी उकालो लाग्न थालेको नेप्से परिसूचक ९ सय ८२ दशमलव ५६ मा ओर्लियो । अन्तिम १ घण्टाको व्यापारमा बजार केही सम्हालिँदै बढ्न थालेको नेप्से परिसूचक ९ सय ८६ दशमलव ६६ मा पुगेको छ ।
दुई दिन निरन्तर बजार उकालो लागेपछि छोटो समयमा नाफा कमाउन चाहने लगानीकर्ताले बजारमा विक्री चाप बढाएपछि समग्र शेयर बजार ओरालो लागेको हो । नेप्सेमा सर्वाधिक शेयर सूचिकृत रहेको समूहमध्ये बिहीवार बैङ्किङ र बीमा समूहको परिसूचक घटेपछि बजार ओरालो लागेको हो ।
बिहीवार व्यापारमा आएका बीमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी शून्य दशमलव ५४ प्रतिशतले घटेको छ । त्यसैगरी, उत्पादन तथा प्रसोधन समूहको परिसूचक शून्य दशमलव २१, विकास बैङ्क शून्य दशमलव १९ र बैङ्किङ शून्य दशमलव १४ प्रतिशतले घटेको छ । सो दिन होटेल, जलविद्युत् र वित्त कम्पनी सबै समूहको परिसूचक शून्य दशमलव १७ प्रतिशतले बढेको छ । बिहीवार ‘अन्य’ समूहको परिसूचक स्थिर रह्यो ।
बिहीवार नेप्सेमा ३ हजार २७ व्यापारबाट १ सय ४३ कम्पनीको १८ लाख ७६ हजार कित्ता शेयर खरिदविक्री भयो । जसबाट रू. ६५ करोड रकम परिचालन भयो भने रू. १० खर्ब ११ अर्बको कुल बजार पूँजीकरण भयो । सो दिन नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कको संस्थापक शेयर सर्वाधिक रू. २९ करोड ५४ लाख बराबरको खरीदविक्री भयो । बिहीवार हामा मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्स र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको संस्थापक शेयरको मूल्य सर्वाधिक १० प्रतिशतले बढ्यो । त्यसैगरी, माउण्ट मकालु डेभलपमेण्ट बैङ्कको शेयरमूल्य सबैभन्दा बढी ७ दशमलव ४५ प्रतिशतले घट्यो ।